एक करोडको लागतमा सनलाइनर र मोहित गाडि सञ्चालनमा एक करोडको लागतमा सनलाइनर र मोहित गाडि सञ्चालनमा
एक करोडको लागतमा सनलाइनर र मोहित गाडि सञ्चालनमा
पुनहरि बेल्बासे भैरहवा । सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रा.लि. भैरहवाले करिब एक करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न गाडि सञ्चालनमा ल्याएको छ । लुम्बिनी देखि भैरहवा, बुटवल हुँदै काठमाडौँ पुग्ने सनलाइनर र मोहित नामका गाडि सञ्चालनमा आएका हुन् । सनलाइनरका २ ओटा गाडि र मोहितका २ ओटा गाडि रहेका छन्, प्रत्येक गाडिको मूल्य करिब एक करोड लागत परेको सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रा.लि. का अध्यक्ष सञ्जिब रोक्काले बताएका छन् ।
यात्रुहरुलाई सुविधा सम्पन्न बसबाट यात्रा गराउने उद्देश्यले उक्त गाडिहरु भित्राइएको बताउँदै यी गाडिमा यात्रा गर्दा सामाजिक दुरी कायम हुनुका साथै महिला मैत्री सिट रहेका छन् अध्यक्ष रोक्काले भने । ठूलो गाडि भए पनि अहिलेको महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ लाई लक्षित गरि सामाजिक दुरी कायम गरि सिटको व्यवस्था मिलाउँदा जम्मा ३० सिट मात्रै गाडिमा रहेको छ । यो गाडि चढ्ने यात्रुले लुम्बिनी देखि काठमाडौँ सम्मको भाडा एक हजार तिर्नु पर्ने छ ।
महामारिका बेला गाडि जहाँ पायो त्यही रोकि खाना तथा खाजा खुवाउँदा असुरक्षित हुने भएकोले एक हजार भाडा लिए वापत नास्ता, पानी, ५० एम एल को सिनेटाइजर, हाते पञ्जा र माक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । गाडिमा सामाजिक दूरी कायम गरि फेम्ली सिट र महिला सिट गरि दुई प्रकारका सिटको व्यवस्था मिलाइएको छ । गाडि आज बेलुका ७ बजे लुम्बिनीबाट छुट्ने छ । ८ बजे भैरहवाबाट र ९ बजे बुटवलबाट छुटि भोली बिहान काठमाडौँ पुग्ने छ ।